ကျော်ခ| November 14, 2012 | Hits:1
| | ရွှေဘိုငလျင် ဒုက္ခသည် တချို့ (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
ကလောရွှေတွင်းပြိုမှု ၁၇ ဦးသေ၊ ၈ ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲအင်းလေးကန် မနှစ်ကထက် ပိုခန်းသဖြင့် သောက်ရေအတွက် အခက်အခဲရှိနေမိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ပါတီကြီး ၂ ခုလည်း ကူညီကရင်ပြည်နယ် အတွက် Japan Platform အဖွဲ့ ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း ထောက်ပံ့မည်ဗြိတိန် - သြစတေးလျ နှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီး မြန်မာပြည်ကို ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ကျော် ကူညီမည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ရာဇာ November 14, 2012 - 7:41 pm	အော်….ကိုကြီးစိုး ရယ်….စာရင်းဇယား တွေ ငြိမ်အောင်များ စောင့်နေရတယ်လို့….ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ…အဲဒီစာရင်းဇယား တွေငြိမ်အောင် ဘယ်အချိန်ထိ စောင့်ရမှာလဲ????…အဲ့ဒီ စာရင်းဇယားတွေ ငြိမ်အောင် ကိုကြီးစိုး တို့က ၁၀ နှစ်စောင့်လဲ ပြသနာ မရှိဘူးလေ..နေစရာ စားစရာတွေက အပြည့်နဲ့ကိုး….ဟိုမှာ တကယ်တန်း ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေက တရက်မပြောနဲ့ တနာရီတောင် မစောင့်နိုင်ကြတော့ဘူး….စားစရာမရှိ..နေစရာမရှိ တဲ့ သူတွေရဲ့ ဘဝလေးကို ခေတ္တခဏ စိတ်ထဲ စဉ်းစားပြီး မှ ပြောပါဗျာ….ပေးချင်တဲ့သူရှိနေတာတောင် အချိန်ကို စောင့်ခိုင်းနေရယ်လို့ဗျာ…သူတို့အကူအညီ ပေးမယ်ဆိုတာ ဘာစာရင်းဇယား နဲ့မှ မဆိုင်ပါဘူးဗျာ…လောလောဆယ် ရထားတဲ့ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ဆိုတာ လေးပေးလိုက်ရင် သူတို့လုပ်တတ်ပါတယ်….ပစ္စည်းလိုလို့ ထပ်မှာရင်လဲ ၂၄ နာရီ အတွင်း ရနိုင်ပါတယ်….အစားအစာ ဆိုလဲ အခြေခံကြ တဲ့ ဆန်ဆီဆား ကပြည်တွင်းမှာရပါတယ်…အဓိက ငွေပါဘဲ….ခက်တယ်…ကိုယ့်အတွက် ဆိုရင် တမိနစ်တောင် အစွန်းမခံနိုင် ကြပေမဲ့ အများအတွက်ဆိုရင် ဟိုလူ့ခွင့်ပြုချက်ယူရ..ဒီလူ့ခွင့်ပြုချက် ယူရနဲ့ အချိန်တွေ ဖြုန်းနေကြတယ်….လိုအပ်ရင် prompt action လေးများ လုပ်ကြပါအုံး….စကားမစပ်…..ရခိုင်အရေး အတွက် လူသားခြင်း စာနာလို့ အကူအညီတွေ ပေးချင်လှချည်ရဲ့ ဆိုတဲ့ OIC အသင်းရော ကူညီဘို့ ကမ်းလှမ်းသေးလား???????….ကြုံရင် မေးကြည့်လိုက်ပါအုံး…
Reply	တခြားဖတ်စရာများ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးအားလုံး ပညာသင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးမည်